16 လက်မကားဘီးဖြုတ် Li-ion လီသီယမ်ဘက်ထရီများနှင့်လူကြီးများအတွက်အစွမ်းထက်မော်တာနှင့်အတူ 2018 ဥရောပပူအရောင်းရဆုံးက e-စက်ဘီးလျှပ်စစ်စက်ဘီး r809 - တရုတ်ရှန်ကျန်း Rooder နည်းပညာ
ဝှက်ထားသောဘက်ထရီနှင့်အတူ 16 လက်မ 250w 36v လျှပ်စစ်စက်ဘီးဈ ...
မြို့က c Rooder လျှပ်စစ် Scooter citycoco EEC ခွင့်ပြုချက် ...
ကြီးမားသောဘီးအဆီတာယာနှင့်အတူ Harley el Scooter တောင်မြောက် r804d ...
နှစ်ခုဘီး hoverboard ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းထုတ်လုပ်သူစက်ရုံင ...
2 ဘီးလျှပ်စစ်ကန် Rooder လက်ကားအရည်အသွေးမြင့် ...
Rooder ကာဗွန်ဖိုင်ဘာလျှပ်စစ် Scooter အဆိုပါပေါ့ပါးဆုံး ki ...
16 လက်မဘီးဖြုတ် Li-ion လီသီယမ်ဘက်ထရီများနှင့်လူကြီးများအတွက်အစွမ်းထက်မော်တာနှင့်အတူ 2018 ဥရောပပူအရောင်းရဆုံးက e-စက်ဘီးလျှပ်စစ်စက်ဘီး r809
အရည်အသွေးမြင့်မားသော e-စက်ဘီး, Rooder က e-စက်ဘီးစက်ရုံကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းထုတ်လုပ်သူတင်ပို့ကုမ္ပဏီထံမှလက္ကားအနိမ့်သောစျေးနှုန်းက e-စက်ဘီးရှာရန်
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်: OEM / လိမ္မော်ရောင် / ROODER
ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ကျန်း / ဟောင်ကောင်
ငွေပေးချေမှုရမည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ: T / T / L ကို A / C, PayPal, D ကို / A, D ကို / P ကို
Rooder မြင့်မားတဲ့အဆုံးစက်ဘီး, များအတွက် R & D, ကုန်ထုတ်လုပ်ရေးနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစျေးကွက်မှကိုယျ့ကိုယျကိုအပျနှံခဲ့ကြပါပြီ လျှပ်စစ်စက်ဘီး s နှင့်ဆွေမျိုးထုတ်ကုန်။ အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်တစ်ကမ္ဘာလုံးအားလုံးအတွက်အဆင်သင့်ဈေးကွက်ရှာပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏, Rooder ကြောင့်ယင်း၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး, ချောလက်ရာနှင့်ကမ္ဘာကြီးကိုခေတ်မှီဒီဇိုင်းကိုမှအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဂုဏ်သတင်းကိုပျော်မွေ့။ ယခုငါတို့ယုံကြည်စိတ်ချရသောကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းကွန်ရက်များစတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးပြီကမ္ဘာပေါ်မှာအားလုံးမိတ်ဖက်အတူတို့သည်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုစေပြီ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်မှန်းချက်, ငါတို့အတူတူစကားချီးဖွံ့ဖြိုးဆဲနေစဉ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်ရဲ့ခက်ခဲရရှိခဲ့သည်ပိုက်ဆံကပိုအဖိုးတန်စေရန်ဖြစ်ပါသည်။
If you need good high-end bikes, လျှပ်စစ်စက်ဘီး s and parts fromaprofessional original manufacturer, we should be the right one that you are looking for. It is no doubt after you select us as your reliable supplier, you will enjoy the same great success as our other partners have done.
2018 ဥရောပပူအရောင်းရဆုံးက e-စက်ဘီး လျှပ်စစ်စက်ဘီး 16 လက်မဘီးဖြုတ် Li-ion လီသီယမ်ဘက်ထရီနှင့် e-စက်ဘီးစက်ရုံထဲကနေလူကြီးများအတွက်အစွမ်းထက်မော်တာတွေနဲ့ r809
မော်တာ: 36v250w gearless မော်တာ
ကိုချိုးဖျက်: ရှေ့ & နောက်ဘက် disc ကိုချိုး
display: LCD Display ကို
max ကိုဝန်: 100kg
ထိပ်တန်းမြန်နှုန်း: 25km / h
ဗူးအရွယ်အစား: 1320 * 650 * 260mm
ယခင်: ရောင်းရန်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအဘို့ 8 လက်မတာယာလီသီယမ်ဘက်ထရီအစွမ်းထက် brushless မော်တာတွေနဲ့လျှပ်စစ်ကန် Scooter r803e
နောက်တစ်ခု: နှစ်ခုဘီး hoverboard ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းထုတ်လုပ်သူစက်ရုံတင်ပို့ကုမ္ပဏီတရုတ်နိုင်ငံ Shenzhen rooder နည်းပညာ Co. , Ltd
16 လက်မ mini ကိုက e-စက်ဘီး
2018 ဥရောပပူအရောင်းရဆုံးက e-စက်ဘီး
250w 36v 5.2ah လီသီယမ်ဘက်ထရီ
ကုန်းဆင်းတွင် ebike 500 ဝပ်ကုန်းနှီးဘက်ထရီ ebike
ရောင်းချရုံး 350w လျှပ်စစ်စက်ဘီး - 350w လျှပ်စစ်စက်ဘီး
Rooder အဆီဘီး Harley လျှပ်စစ် Scooter ကြီးတွေ Wh ...
လျှပ်စစ်2ဘီး Rooder လက်ကားအရည်အသွေးမြင့် ...
အသစ်က Harley လျှပ်စစ် Scooter citycoco r80 Rooder ...